Maninona i Trump dia tsy mpanohitra ny globalista fa ny aristokrasiana hafa dia: Martin Vrijland
Manontany tena ve ianao ankehitriny fa maninona ny mpanao politika amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo dia mitaky zavatra izay manipy azy foana taorian'ny fifidianana? Any Holandy (sy ny demokrasia hafa izay misy rafitra marobe isan-karazany) dia afaka manafina ao ambadiky ny filazan'ny maha-ilaina ny marimaritra iraisana amin'ny firaisankina iraisana ny olona iray. Tsy maintsy ampidirina ao anaty divay avy hatrany ny rano ho an'ny fifanarahana fiaraha-miasa.
Ao amin'ny firenentsika koa, dia mahita teny lehibe maro isika mandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana raha ampitahaina amin'ny fampiharana amin'ny fampiharana. Any Etazonia no tena andrasan'ny kandida filoham-pirenena ary betsaka ny tsy fitoviana hita raha oharina amin'ireo fampanantenana natao sy ny hetsika aorian'izay. Mazava ho azy, azo iadiana hevitra hatrany ny niova ny toe-javatra, ka ny drafitra ihany koa dia miova ny fampiharana, saingy tokony hiombon-kevitra ny rehetra fa mpandainga ny matihanina ny mpanao politika.
Mpampiasa mpanao politika dia mpandainga matihanina izay mianatra kabary mahafinaritra mandritra ny fifidianana hanipy azy ireo amin'ny fampiharana.
Publicon Brandon Smith dia iray amin'ireo mpanoratra vitsivitsy ao amin'ny faritra izay miantso ny tenany ho 'haino aman-jery hafa', izay afaka mahita izay lalao atao amin'ny sehatra manerantany. in ny lahatsoratra farany nataony mampiseho ohatra amin'ireo filoham-pirenena izay nanao fampanantenana manohitra ny fametrahana izy ireo nandritra ny fampielezan-kevitra nataony, ary avy eo nohodidinin'ireo olona ireo ihany (izay mbola nokapohina mafy tokoa tamin'ny fampielezan-kevitra). Ho an'ireo mpandahateny tsy miteny anglisy eo aminareo, dia apetrako eto ny ampahany amin'io lahatsoratra io, nadika amin'ny teny holandey, ary avy eo ny fanenjehana.
Jimmy Carter dia nanomboka ny fampielezan-keviny filoham-pirenena tamin'ny 4% naharikoriko tamin'ny fifidianana demokratika. Nitifitra tamin'ny lazany i Carter taorian'ny fanafihana ilay nantsoiny hoe "insiders Washington"; ny elite izay mitantana ny fampisehoana avy ao ambadiky ny ambainy. Boky paperback miparitaka be dia be nampiroborobo i Carter nandritra ny fampielezan-kevitra nataony hoe "ITsy handainga amiko mihitsy ianao: Jimmy Carter amin'ny teninyNotsipihan'ny kandida filoham-pirenena tamin'ny fivoriana tany Boston:
"Ny olona eto amin'ity firenena ity dia mahafantatra avy amin'ny zava-niainana mangidy fa tsy hahazo fanovana isika amin'ny alàlan'ny fiarahana miasa amin'ireo vondrona mpanafika mandritra ny fotoana rehetra."
Ny tena mpanampy azy, Hamilton Jordan dia nampanantena fa:
"Raha aorian'ny fanokafana dia mahita Cy Vance amin'ny maha sekretera an'ny fanjakana ianao ary i Zbigniew Brzezinski ho Lehiben'ny fiarovam-pirenena, dia hiteny aho hoe tsy nahomby izahay; dia hijanona aho."
I Carter dia naseho ho toy ny mpitondra fanjakana izay tsy nifandray tamin'ny globalista; lehilahy manam-pinoana ary mpifaninana fotsy marina misy finiavana madio. Hita izany ho sary manan-danja tamin'izany fotoana izany. Taorian'ny famonoana an'i John F. Kennedy, ny firotsahan'ny filoham-pirenena ny tena anti-globalista Barry Goldwater sy ny andraikitra be an'i Henry Kissinger amin'ny fitantanan'i Richard Nixon dia nanjary tsy sahiran-tsaina ny vahoaka momba ny toetran'ny governemanta sy izay tena tompon'andraikitra. nanana. Carter dia hita ho fanafody fanadinoana ny fahatokisan'ny vahoaka.
Ankehitriny, raha vao nandray andraikitra i Carter dia tsy nitsindrona mpikambana tsy latsaky ny folo amin'ny mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny Trilateral maneran-tany sy ireo elitistes maro hafa amin'ny toerana ambony ao amin'ny governemantany, anisan'izany i Cy Vance sy Zbigniew Brzezinski. Ary mazava ho azy, ny mpiasa ambony ao Hamilton Jordan, dia tsy nijanona mihitsy. Ny elita dia nahalala tsara ny tian'ny besinimaro tamin'izany fotoana izany teo amin'ny tantara, ary nomen'izy ireo an'i Jimmy Carter izy ireo. Ny governemanta Carter dia hanome tombontsoa eran-tany tsy hita isa, noho ny hatezeran'ireo vahoaka amerikana izay nahatsapa ho namadika.
Ity dia sakafo ho an'i Ronald Reagan, ilay kandidà anti-Carter. Ilay mpandala ny nentin-drazana (sy ny demokraty teo aloha) izay tsy natahotra ny hanamarika fa i Carter dia nohodidinin'ny olona avy amin'ny vaomiera Trilateral. Reagan nanontany tena tamim-pahatokiana i Carter. Nanafika an'i Carter i Reagan raha nitazona ny lavitra ny fiteny "mpiray tsikombakomba". Nambarany tao amin'ny 1980 nandritra ny fampielezankeviny:
"Tsy mino aho fa vondrona mpiray tsikombakomba ny Vaomieran'ny Trilateral, saingy ataoko fa ny tombontsoany dia mifantoka amin'ny banky iraisam-pirenena, ny orinasam-pirenena, sy ny sisa. Tsy heveriko fa sivy ambin'ny folo eo amin'ny fitondrana amerikana no tokony ho fitaovan'ny olona avy amin'ny vondrona na fikambanana iray maneho ny fomba fijery iray. Tsia, handeha amin'ny lalana hafa aho ... "
Reagan, toa an'i Carter, dia nampandrenesina ho olona tsy nifamatotra tamin'ny sangany sy ny globalista. Madio sy tsy nisy nirina izy. Saingy indrisy fa tsy ela dia nisafidy ny kaomisera 10 Trilateral farafaharatsiny ho an'ny ekipan'ny tetezamita i Reagan taorian'ny fandreseny. Nandritra ny fe-potoam-piadidiany roa tao amin'ny Trano Fotsy dia nanolotra tombotsoa iraisam-pirenena koa izy (teo ambanin'ny mason'i George HW Bush).
Raha mahazatra anao izany, dia angamba mbola mifoha sy mahafantatra bebe kokoa ianao. Mampiasa paikady mitovy ihany ny mazotoa, mazàna miaraka amin'ny tsy fitoviana kely mba hahatonga zava-baovao. Araka ny fantatry ny maro amin'ireo mpamaky ahy, tato anatin'ny taona vitsivitsy izay dia nanondro tsy tapaka ny sarin'ireo anti-globalista mamitaka an'i Donald Trump aho. Ny fanjakàny dia nitovy fatra mitovy amin'ny voalaza etsy ambony (misy fahasamihafana misy ihany koa).
Trump dia nanao ny fampielezan-keviny amin'ny maha-vahoaka sy mpanohitra ny elita. Ny endriny dia ny an'ny olona iray tsy voataonan'ny herin'ny fananganana. Ny tohan-kevitra lehibe an'ny mpanohana azy dia ny hoe "nanankarena" i Trump ka "tsy azo vidina." Notsikeriny i Hillary Clinton sy ny fifandraisany lalina amin'ny banky toa an'i Goldman Sachs ary nanambara izy fa hanadio an'i Washington. Raha te ho tonga filoham-pirenena izy, dia ampiharo ny "tatatra ny sisin-tany" (mampandeha ny làlana).
Nanao fanamafisana matanjaka manohitra ny Federal Reserve (FED) izy ary nanondro fa "lainga" ara-toekarena "sy ireo mpividy ny tsenam-bola tsara dia mpamitaka; borona noforonin'ireo fonosana famporisihana sy taham-pahalalana saika tsy ampy. Tsy te ho voafatotra an'io lova io izy. Trump dia io 'ksatria amin'ny soavaly fotsy' izay vonona ny handroaka ilay dragona globalista.
Araka ny fantatry ny mpikatroka momba ny fahalalahana ankehitriny, lavitra ny maha-anti-globalista an'i Trump. Tahaka an'i Carter sy Reagan ihany koa, dia nameno ny kabinetrany i Trump tamin'ny fotoana tsy voafehiny tamin'ny gadra elita avy amin'ny Council on Foreign Relations, Goldman Sachs, JP Morgan, sy ny sisa. Tsy mitovy tanteraka ny fiaviany mihitsy. I Trump dia novidiana novokarin'ny fianakaviana banky Rothschild. Rothschild agent Wilber Ross no lehilahy izay nanao ny raharaha mba hamonjy an'i Trump amin'ny tendrombohitra trosany lehibe any amin'ny orinasan-trano maro any Atlantika City. Izany dia namonjy ny valan'i Trump ary koa ny sariny. Ankehitriny, Wilber Ross mitovy ihany amin'ny sekreteran'ny varotra ao Trump.
Ao amin'ny lahatsoratra maromaro dia nohazavaiko fa i Trump dia mbola pahefana hafa ary ny asany dia manana refy fanampiny. I Trump dia ao anatin'ny sokajy mpanao politika navela hanao marika 'mahitsy' manerana an'i Andrefana. Ny olona toa an'i Boris Johnson sy Nigel Farage dia tafiditra ao anatin'ny sokajy mitovy ihany, fa ao amin'ny karazana firenena azy manokana toa ny Wilders sy Baudet ihany koa. Hitanay ihany koa ny fisian'ireo haino aman-jery hafa voafehy izay mety hitondra anjara amin'ity fananganana marika ity. Izany no antony nahatonga an'i Robert Jensen ilay mpikomy (efa voafaritra tsara) nandefa tsara an'i Donald Trump (sy ny zava-drehetra mifandraika amin'ny marika 'mety').
Mahita fomba famaritana mazava sy fampifandraisana ireo hevitra ireo amin'ny marika 'ankavia' miampy marika «havanana» isika. Ny marika ‘ankavanana’ dia misy ny olana toy ny ‘anti-globalization’, ‘anti-LGBTI propaganda’, ‘anti-mpifindra monina’, ‘tsy mino ny fiovan'ny toetrandro na fiakaran'ny hafanana maneran-tany’; Ny sarin'ny 'tadidin'ny vehivavy tsy mpinamana' dia tafiditra ihany koa, fa ny fanakianana ireo zava-nitranga ara-tantara toa ny 911 dia mifamatotra mazava amin'io marika io amin'ny alàlan'ny stigma ny «teoria fikaon-doha '. Misy ihany koa ny fiezahana mahatsiravina mampifandray ilay tranokala izay vakinao amin'ny izany marika izany.
Nahoana no zava-dehibe ny fananganana ireo marika ireo? Eny, efa nanazava tamin'ny lahatsoratra maro ihany koa aho ary haveriko eto indray. Mazava ny hoe eo ny lafiny ara-toekarena amerikana sy Angletera dia eo am-pototry ny fianjerana. Raha ny momba an'i Etazonia dia nokasaina tamin'ny alàlan'ny fanontana vola tsy misy fetra nataon'ny Federal Reserve (FED), ny hanomezana io vola io amin'ny orinasa lehibe amin'ny endrika findramam-bola maimaimpoana. Ireo orinasa ireo dia afaka nividy ny anjarany manokana ary nampiakatra ny vidin'ny tsena. Na izany aza, i Trump dia tokony ho afaka nanameloka ny fiverenan'ny ho avy ary izany no antony nanombohan'i Trump ny ady fivarotany. Any UK, ny deba Brexit dia ilay mainty hoditra amin'ny lozam-pifamoivoizana ho avy.
Amin'izay dia noforoninao ny 'marika' marika tsara (sy ireo hevitra rehetra nifandraisanao aminy) sy baomba miafina ao ambanin'ny toekarena. Efa an-taonako maro no niantso aho fa hipoahana an'io baomba io. Amin'ny fantsom-baravarana tsy misy aloka amin'ny fotoana mahamety azy, dia manapoaka ny toekarena ianao amin'ny iray avy hatrany dia ny hevitra rehetra izay nampifandraisanao an'io marika io 'tsara'.
Ny lesona azontsika ianarana avy amin'izany dia ny haino aman-jery sy ny politika dia afaka manohy misambotra ny endrika rehetra amin'ny hevitra ao amin'ny fiaraha-monina amin'ny alàlan'ny fironana politika vaovao sy ny feo vaovao. Azontsika atao ihany koa ny mamintina fa ny paikady etsy ambony dia manaisotra tsikera rehetra avy amin'ny fiarahamonina izay manohitra ny fanapariam-pahefana bebe kokoa. Ny vokatra farany dia ny fanesorana tsikera ny fananganana governemanta manerantany ary afaka miasa tsikelikely mankany amin'ny fifehezana foibe sy ny fanjakana ara-polisy ianao. Polisy ao anatin'ny endrika sivana amin'ny hevitra manokana izay azo ampifandraisina amin'ny marika 'havanana'; io marika io izay nahatonga ny loza ara-toekarena.
Reko ankehitriny fa mieritreritra ianao:Eny, saingy ahoana no tokony hanaovana an'izany? Inona no azontsika atao momba izany? Tsy manova na inona na inona momba izany ianao. Mila mandroaka ny elanelana ve isika? Moa ve mila mandoka ireo mpanao politika rehetra amin'ny tranobeny isika? Tokony hanao revolisiona ve isika ary manantena fa hanohana antsika ny tafika?”Eny, maro tokoa ireo fanontaniana ireo ary ny fanontaniana hoe inona no mifanohitra amin'ny fandikana ny demokrasia ankehitriny dia mitombina. Afaka manontany tena ihany isika hoe ahoana no ahafahantsika mamaha ny tsy fahazoana antoka amin'ny haino aman-jery ary ireo haino aman-jery mifehy hafa. Ireo karazana fanontaniana rehetra ireo no antony hanoratana boky. Ao amin'io boky io dia manamafy ny sosona fandaharana rehetra aho ary manazava ny fomba ahafahantsika mahatsapa ny fiovana. Ny boky dia mamintina lohahevitra maro izay efa noresahiko tao amin'ireo lahatsoratra amin'ity tranonkala ity ary nametraka azy tamin'ny endrika efa misy. Izany dia manamora ny boky hovakiana ho an'izay vaovao amin'ilay foto-kevitra na mbola mila mifoha. Kao boky mora zaraina amin'ny fianakaviana sy ny namany. Izany no antony hisian'ny fiovana. Afaka manao ny fanovana ve isika? Eny.
Miaraka amin'ny fividianana an'ity boky ity dia manohana ny asako mandritra ny taona maro amin'ny maha mpanoratra ary manampy ahy hanohy hery feno ianao.
Lisitry ny rohy loharano: alt-market.com
Tags: tsy tia, Brandon, asa nanirahana, Donald, sangany, Featured, fanatontoloana, globalist, globalists, Jensen, jensen.nl, Marka, marina, Smith, trilateral, Trump
22 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 35
Azo antoka fa mpikambana ao amin'ny klioba sy tsy fahaizan'ny Sulis i Trump, tsy matematika avo kokoa izany fa famaranana azonao atao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fihetsiny tato anatin'ny folo taona lasa. Ary ny mahita ireo olona manodidina azy .. Ny vahoaka dia afaka manelingelina sy manipy fasika eo imasony amin'ny alàlan'ny PsyOps isan-karazany toy ny Impeachment, Epstein, Russia Collusion sns sns kanefa ny fanapahan-kevitra lehibe maro no raisina
Tena betsaka amin'ny #Resistance! Raha ny fakana am-bavany ny maso rehetra dia nankatoavin'ny trano ny lalàna PATRIOT
Trump dia nandona ny Federal Reserve nandritra ny kabary talohan'ny club Club any New York
22 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 22
Ity Mazava ho azy fa mihatra amin'ny antoko / hetsika ara-politika rehetra.
Ny Antoko Repoblikana dia mety hitarika ny olona hino fa ho tanteraka ny fampanantenany amin'ny ho avy. Manaraka ny tsipika Hitler ry zareo - na manao ahoana na manao ahoana ny lainga be; avereno matetika izany ary ny vahoaka dia handray azy io ho fahamarinana.
24 Novambra 2019 ao amin'ny 18: 52
Raha mbola tsy mifototra amin'ny loharanom-baovao ny olana eran-tany, dia avelantsika hiaraka amin'ireo elite mpifindra monina izay mamorona ny serivisy amin'ny alàlan'ny setroka sy fitaratra, injeniera sosialy, ady sandoka, sns ... Ny olom-pirenena tsara (bb) dia tsy mahalala tsara: tsy te hahalala tsara ary mieritreritra fa ny zava-misy ankehitriny dia ny ambony indrindra azo tratrarina, fa izy ireo 'afaka'. Toa tsy misy fiovan'ny fitondrana ao Madurodam, farafaharatsiny mba fotoana fohy
Tsy maheno intsony ny momba ny tantsaha, ny tontolon'ny fanorenana sns aho.
Ny olona tsara fanahy miaina eto.
26 Novambra 2019 ao amin'ny 01: 37
mijanona ho sarotra ny tantara miaraka amin'ireo ahiahy mahazatra, mety ho sitrana tsara ny fivontosanan'ny homamiadana .. tsy maintsy mandeha araka ny Soratra Masina izany alohan'ny hisehoan'ny fiovana.
https://www.statenvertaling.net/bijbel/ezec/38.html [sy 39]
26 Novambra 2019 ao amin'ny 16: 08
Ny jeneraly Henry Makow tokoa tokoa dia manana tranonkala mahaliana momba ny toe-piainan'izao tontolo izao. Nomena ho ahy.
30 Novambra 2019 ao amin'ny 12: 47
Mandritra izany amin'ny mpifanolobodirindrina amintsika ,,,,,
Miambena mandra-pahatongan'ny farany. Hoy i Angela Merkel: tokony hesorinay ny fahalalahanao miteny, raha tsy izany dia tsy ho afaka ny fiarahamonina. pic.twitter.com/Y3qROvDQXg
- Ezra Levant @ (@ezralevant) Novambra 28 2019
30 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 18
30 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 21
Ny adin'i proxler an'i Hitler dia tsy maintsy namorona toerana fametrahana ny tena Nazi any Brussels. Ny ady manaraka dia hitodika manodidina an'i Jerosalema, ary hiafara amin'ny fametrahana ny governemanta an'izao tontolo izao, fa alohan'ny hisian'izany ady izany, ireo mpitarika any Brussels aloha dia manome lalana ny mpitarika vaovao matanjaka: Recep Tayyip Erdogan.
30 Novambra 2019 ao amin'ny 13: 35
Oh eny.Tsy lazaina intsony ny foiben'ny OTAN
« Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena angon-drakitra ADN noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet
Ny kapitalisma sy ny demokrasia mahamenatra, ny lalana miadana amin'ny fascismista »
Total visits: 15.825.256
Zandi Eyes op Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?
Martin Vrijland op Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?